ပွဲဆက်တွေများတဲ့စနေ တနင်္ဂနွေအတွက် ထပ်တိုးရွေးချယ်ရမယ့် ပွဲလေးတွေ - For her Myanmar
အကုန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပွဲတွေချည်းပဲမို့ ရွေးရခက်မှာ အသေအချာပဲ
စနေ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်တွေ တစ်ပတ်လည်လာပြန်ပြီ ယောင်းရေ…ခုထိဘယ်သွားလို့သွားရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတုန်းလား။ မင်မင်ကတော့ စနေ တနင်္ဂနွေအတွက် အစီအစဉ်တွေကြိုတင်ချထားပြီးပါပြီ ။ ဒီတော့ ယောင်းတို့ကိုလည်း စေတနာအရင်းခံပြီး မင်မင်သိထားတဲ့ပွဲလေးတွေအကြောင်း ဝေမျှပေးမယ်နော်။
Fortune TV Be Music Festival (ပျော်ရွှင်ပါ ပွဲတော်)
ယောင်းတို့ရေ…. ဒီပွဲလေးကတော့ အကောင်းဆုံးသော ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ် တွေနဲ့ တင်ဆက်ဖျော်ဖြေသွားမယ့် Digital Free to Air ရုပ်သံလိုင်းသစ် Fortune TV ကကျင်းပပြုလုပ်မယ့်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်မယ့် အပြင် ပွဲတော်ဆီ မလာရောက်နိုင်သူတွေအတွက် Facebook နဲ့ Fortune TV ရုပ်သံလိုင်း တို့မှာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ‘​ပျော်​ရွှင်​ပါ ပွဲ​တော်’​ လက်​မှတ်​ တွေကို
(၁) Harry’s Bar ဆိုင်များ ( မြန်မာပလာဇာ ၊ Junction Square)
(၂) feel စားသောက်ဆိုင်များ ( ဝိတိုရိယ၊ Taste2၊ ပြည်ထောင်စု ရိပ်သာလမ်း၊ New Doreen)
(၃) စိမ်းလန်းစိုပြေဂါးဒင်း (အင်းလျားလမ်း ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်) တို့မှာ အခမဲ့ ကြိုတင်ထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ချစ်တဲ့ ရန်အောင်၊ ကော်နီ၊ ဂျီလတ်၊ ရွှေထူး၊ ပန်းရောင်ခြယ်၊ Project-K စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေ ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ” Fortune TV Be Happy Music Festival – ပျော်ရွှင်ပါပွဲတော် ” ကို လာမယ့် ၂၃၊ ၂၊ ၂၀၁၉ (စနေနေ့)၊ ညနေ (၄) နာရီ အချိန်၊ The One Entertainment Park မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ပွဲတော်အကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ” Fortune TV ” Facebook Page နဲ့ ” Fortune TV Be Happy Music Festival – ပျော်ရွှင်ပါပွဲတော် ” Event Page တို့မှာ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…..
Related article>>>၂၀၁၉ ချစ်သူများနေ့ညမှာ အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ For Her Myanmar ရဲ့ Singles’ Night Event
ယောင်းတို့ရေ…..နာမည်လေးကြားရုံနဲ့ အစားတစ်လိုင်းယောင်းတို့ ရင်ခုန်သွားမှာကို မင်မင်အကြားအမြင်ရနေပါတယ်နော်။ ဒီပွဲလေးကိုတော့ Samyangfoods Myanmar ကနေကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ယောင်းတို့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့ရဲ့ အမည်…နေရပ်လိပ်စာ… မွေးသက္ကရာဇ်…မှတ်ပုံတင်အမှတ်…ဖုန်းနံပါတ် တို့ကို Samyangfoods Myanmar ရဲ့ CB ကနေ ပေးပို့ပြီး စာရင်းပေးသွင်းလို့ရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၄)ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ၊ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ညနေ(၆)နာရီအထိဖြစ်ပြီး စံရိပ်ငြိမ်(ဂမုန်းပွင့်) မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယောင်းတို့ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ဒီ Link မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။
ယောင်းတို့ရေ.. ဒီပွဲလေးကတော့ မိမိကိုယ်ကို အဖြေရှာမတွေ့တဲ့ ပြဿနာရှိနေသူများ၊ LGBTIQ ဖြစ်လို့ မိသားစုနဲ့ အဆင်မပြေသူများ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ရင်ဖွင့်ချင်နေသူများကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၄)ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၁၁ ခွဲ ကနေ ၁ နာရီ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး ပွဲလာရောက်သူတွေကို ထမင်းကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်းပမယ့် နေရာကတော့ အမှတ် ၅ မြေညီထပ်၊ ရှင်စောပုဘုရားလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်တယ်နော်။
ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့လည်း ဘယ်ပွဲသွားရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာသွားလောက်ပါပြီ။ နောက်အပတ်တွေမှာလည်း ယောင်းတို့စိတ်ဝင်စားမယ့်ပွဲလေးတွေကို ရှာဖွေစုစည်းပေးဦးမှာမို့ စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်။
အကုနျစိတျဝငျစားတဲ့ပှဲတှခေညျြးပဲမို့ ရှေးရခကျမှာ အသအေခြာပဲ
စနေ တနင်ျဂနှေ ပိတျရကျတှေ တဈပတျလညျလာပွနျပွီ ယောငျးရေ…ခုထိဘယျသှားလို့သှားရမှနျးမသိ ဖွဈနတေုနျးလား။ မငျမငျကတော့ စနေ တနင်ျဂနှအေတှကျ အစီအစဉျတှကွေိုတငျခထြားပွီးပါပွီ ။ ဒီတော့ ယောငျးတို့ကိုလညျး စတေနာအရငျးခံပွီး မငျမငျသိထားတဲ့ပှဲလေးတှအေကွောငျး ဝမြှေပေးမယျနျော။
Fortune TV Be Music Festival (ပြျောရှငျပါ ပှဲတျော)
ယောငျးတို့ရေ…. ဒီပှဲလေးကတော့ အကောငျးဆုံးသော ဖြျောဖွရေေးအစီအစဉျ တှနေဲ့ တငျဆကျဖြျောဖွသှေားမယျ့ Digital Free to Air ရုပျသံလိုငျးသဈ Fortune TV ကကငျြးပပွုလုပျမယျ့ပှဲလေးဖွဈပါတယျ။ အခမဲ့ တကျရောကျနိုငျမယျ့ အပွငျ ပှဲတျောဆီ မလာရောကျနိုငျသူတှအေတှကျ Facebook နဲ့ Fortune TV ရုပျသံလိုငျး တို့မှာ တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့သှားမှာဖွဈပါတယျ။ ‘ပြျောရှငျပါ ပှဲတျော’ လကျမှတျ တှကေို
(၁) Harry’s Bar ဆိုငျမြား ( မွနျမာပလာဇာ ၊ Junction Square)
(၂) feel စားသောကျဆိုငျမြား ( ဝိတိုရိယ၊ Taste2၊ ပွညျထောငျစု ရိပျသာလမျး၊ New Doreen)
(၃) စိမျးလနျးစိုပွဂေါးဒငျး (အငျးလြားလမျး ၊ ကမာရှတျမွို့နယျ) တို့မှာ အခမဲ့ ကွိုတငျထုတျယူနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျခဈြတဲ့ ရနျအောငျ၊ ကျောနီ၊ ဂြီလတျ၊ ရှထေူး၊ ပနျးရောငျခွယျ၊ Project-K စတဲ့ အနုပညာရှငျတှရေဲ့ ဖြျောဖွရေေးအစီအစဉျတှေ ပါဝငျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ” Fortune TV Be Happy Music Festival – ပြျောရှငျပါပှဲတျော ” ကို လာမယျ့ ၂၃၊ ၂၊ ၂၀၁၉ (စနနေေ့)၊ ညနေ (၄) နာရီ အခြိနျ၊ The One Entertainment Park မှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ
ပှဲတျောအကွောငျး အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို ” Fortune TV ” Facebook Page နဲ့ “ Fortune TV Be Happy Music Festival – ပြျောရှငျပါပှဲတျော ” Event Page တို့မှာ ဝငျရောကျ ဖတျရှုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…..
Related article>>>၂၀၁၉ ခဈြသူမြားနညေ့မှာ အမှတျတရတှေ ဖနျတီးခဲ့တဲ့ For Her Myanmar ရဲ့ Singles’ Night Event
ယောငျးတို့ရေ…..နာမညျလေးကွားရုံနဲ့ အစားတဈလိုငျးယောငျးတို့ ရငျခုနျသှားမှာကို မငျမငျအကွားအမွငျရနပေါတယျနျော။ ဒီပှဲလေးကိုတော့ Samyangfoods Myanmar ကနကေငျြးပပွုလုပျတာဖွဈပါတယျ။ ယောငျးတို့ သှားရောကျယှဉျပွိုငျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ယောငျးတို့ရဲ့ အမညျ…နရေပျလိပျစာ… မှေးသက်ကရာဇျ…မှတျပုံတငျအမှတျ…ဖုနျးနံပါတျ တို့ကို Samyangfoods Myanmar ရဲ့ CB ကနေ ပေးပို့ပွီး စာရငျးပေးသှငျးလို့ရပါတယျ။ ဖဖေျောဝါရီလ(၂၄)ရကျ ၊ တနင်ျဂနှနေေ့ ၊ မနကျ(၁၀)နာရီကနေ ညနေ(၆)နာရီအထိဖွဈပွီး စံရိပျငွိမျ(ဂမုနျးပှငျ့) မှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ယောငျးတို့ အသေးစိတျသိခငျြရငျတော့ ဒီ Link မှာ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုလို့ရပါတယျ။
ယောငျးတို့ရေ.. ဒီပှဲလေးကတော့ မိမိကိုယျကို အဖွရှောမတှတေဲ့ ပွဿနာရှိနသေူမြား၊ LGBTIQ ဖွဈလို့ မိသားစုနဲ့ အဆငျမပွသေူမြား၊ တဈယောကျယောကျကို ရငျဖှငျ့ခငျြနသေူမြားကို ရညျရှယျပွီး ပွုလုပျပေးတာဖွဈပါတယျ။ ဖဖေျောဝါရီလ(၂၄)ရကျ ၊ တနင်ျဂနှနေေ့ မနကျ ၁၁ ခှဲ ကနေ ၁ နာရီ အထိ ကငျြးပပွုလုပျမှာဖွဈပွီး ပှဲလာရောကျသူတှကေို ထမငျးကြှေးမှာဖွဈပါတယျ။ ကငျြးပမယျ့ နရောကတော့ အမှတျ ၅ မွညေီထပျ၊ ရှငျစောပုဘုရားလမျး၊ စမျးခြောငျးမွို့နယျ။ အသေးစိတျကို ဒီမှာ ကွညျ့နိုငျတယျနျော။
ကဲဒီလောကျဆိုရငျတော့ ယောငျးတို့လညျး ဘယျပှဲသှားရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖွတျခကျြခိုငျမာသှားလောကျပါပွီ။ နောကျအပတျတှမှောလညျး ယောငျးတို့စိတျဝငျစားမယျ့ပှဲလေးတှကေို ရှာဖှစေုစညျးပေးဦးမှာမို့ စောငျ့မြှျောပေးကွပါဦးနျော။
Tags: challenge, Event, festival, Food, foodies, fortune show, Happy, Music
သူ့အမေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ချစ်သူအကြောင်း ပိုသိနိုင်တဲ့ အချက်များ